Find X2 Pro ကို Premium Android ဖုန်းလို့ ပြောရင်ကောင်းမလား?
2018 အမှတ်သင်္ကေတ ဒါမှမဟုတ် Revolutionary ဖုန်းတစ်လုံးလို့ တင်စားနိုင်တဲ့ Find X ကို မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Motorized Pop-up Selfie ကင်မရာနဲ့ FullView Display အနှစ်ရသာကို ပေးစွမ်းသွားတဲ့ ဖုန်းအဖြစ် အမှတ်ရကျတယ်။
အထူးသဖြင့် ဒီဇိုင်းအလှကို နှစ်သက်ခဲ့ကျသလို Lamborghini Edition ပါ ထွက်ခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Signature ထုတ်ကုန်ဆိုရင် မမှားပြန်ဘူး။ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မျိုးဆက်သစ် မိတ်ဆက်ဖို့ အခွင့်မသာခဲ့သလို အခြေနေ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေရင်း စိတ်မရှည်တဲ့အဆုံး အွန်လိုင်းကပဲ ကြေညာပစ်လိုက်တယ်။
Industrial Leading နည်းပညာတချို့ ပါလာသလို OPPO အထာအတိုင်း Find X2 ကို ဒီဇိုင်းအလှပေး ထွက်ရှိပေးလာတယ်။
ဒါပေမယ့် ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ လျှောက်လမ်းလို ၂၀၂၀ Trend မလိုက်နိုင်ရင် Flagship Android ဖုန်းမခေါ်ထိုက်ဘူး သွယ်ဝိုက်ဆိုခဲ့တဲ့ S20 အငွေ့သက်က ပါနေဆဲ။ ဒီတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကြေညာထားတဲ့ Find X2 စီးရီးမှာ ဘာထူးခြားသွားပြီလဲ?
အပိတ်စကားလုံးကို စကားချီးစလိုက်ရတာ Samsung လို 120Hz Refresh Rate ရတာကို ဂျင်းမထည့်ဘဲ ကြေညာသွားလို့ပါ။
S20 စီးရီးအကြောင်း တင်ဆက်တုန်းက ဘက်ထရီကြောင့်သာ Lock လုပ်ထားတယ်လို့ ဖော်ပြဖူးတဲ့အတိုင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်ကျော်က Firmware Update ထုတ်ပြီး 120Hz သုံးခွင့်ပေးမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။
Lock လုပ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ဘယ် Single SoC တစ်ခုကမှ 120Hz တွန်းနိုင်တဲ့ ပါဝါ ရှိကိုမရှိပါဘူး (FHD+ Resolution မှာ သုံးနိုင်ရင်တောင် Lowest Setting မှာပဲ ရုန်းနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်) ဒါကြောင့် Smooth Experience ကို Daily Use အတွက် သုံးဖို့ ရည်ရွယ်သလို ဖြစ်လာတယ်။
ကျွန်တော့် Personal အရ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း 90Hz ၊ 120Hz ကို ခရေဇီမဖြစ်ဘူး (ချောမွေ့နေတဲ့ Screen ကို ပွတ်နေရတာ အရသာရှိပေမယ့် ပါရင် သုံးမယ်၊ မပါလည်း ကိစ္စမရှိဘူး) ဒါမယ့် 3168 x 1440p Resolution မှာ 120Hz ပြေးနေမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တဲ့အတွက် Android ဖုန်းတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ထူးခြားချက်က ကွန်ပျူတာ တွေမှာလို 60Hz ဒါမှမဟုတ် 120Hz ၂ မျိုးကို နှစ်သက်သလို ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Dynamic Switch/Change Feature ပါလာတာပါ။ Application တိုင်း ဂိမ်းတိုင်း High Refresh Rate ကို မထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အတွက် Switching Mode က ဘက်ထရီကို ချွေတာရာ ရောက်စေတယ်။
No Headphone Port (Image: SlashGear)
ဒါ့အပြင် HDR Format ကိုလည်း ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် TV တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Motion-smoothing Feature လို စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ကောလာဟလတွေအရ O1 Vision Engine လို နည်းပညာမျိုး OnePlus ဖုန်းတွေမှာလည်း ပါဝင်လာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
With Curved AMOLED Display
100% DCI-P3 Format ထောက်ပံ့အပြင် HDR10+ Panel ဖြစ်တဲ့အတွက် Display ပိုင်းမှာ တစက်မှ မခိုထားဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြွရွလှပနေတဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ အပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့ မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လှတော့လှပါရဲ့ ရုပ်ဖျက်နေတယ်လို့ ကောက်ချက်ပေးရမှာပါ။
Find X2 Pro Cameras
မပါမဖြစ် အရေးပါဆုံး ကင်မရာ အရည်သွေးပိုင်းကိုရော ဘယ်လို ထိန်းချုပ်ထားလဲ? Reno 10x Zoom တုန်းကလို Periscope Telephoto Camera ဒုတိယ မျိုးဆက်ပါဝင်လာတယ်၊ 13MP ကိုပဲ Aperture f/3 အသုံးပြုထားပြီး OPPO အဆိုရ 5x Optic Zoom ရိုက်နိုင်မယ်။
Hybrid Zoom ဆိုရင်တော့ 10x လို့ ကြွေးကြော်ထားပြီး 60x Digital Zoom ရိုက်ကူးနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ S20 Ultra ရဲ့ 100x Space Zoom ကင်မရာနဲ့ ယှဥ်ရင်တော့ 48MP Sensor ကြောင့် Cropping လုပ်ဆောင်ရည် ပိုကောင်းမယ် (လက်တွေ့မှာတော့ 4x Telephoto အရည်သွေးပဲ ထုတ်နိုင်တယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ်)
Ultra-wide နဲ့ Main Camera တွေကို 48MP Sony IMX586 ၊ IMX689 Sensors သုံးထားပြီး Aperture f/2.2 နဲ့ f/1.7 ရှိတယ်။ Ultra-wide အတွက် FoV ကို 120° ထောက်ပံ့ထားပြီး အသစ်ပါဝင်လာတဲ့ Feature တွေ ရွတ်ပြရရင် Dual Native ISO ၊ 12-bit True Capture ၊ Ultra Night Mode 3.0 နဲ့ Ultra Steady Pro တို့ပါပဲ။
S20 စီးရီးတွေမှာလို 8K မရပေမယ့် 4K Quality ကို 60fps နှုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မယ်၊ Selfie အတွက်ကို 32MP Lens ထည့်ပေးထားပြီး ကင်မရာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ DxOMark က 124 မှတ်ပေးထားပေမယ့် မပြောတတ်ဘူး။ Unit ရရင် သေချာကို Review လုပ်သွားပါမယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာတော့ Flagship ဖုန်းလို့ မပြောရအောင် Snapdragon 865 SoC ၊ 12GB (LPDDR5) RAM ၊ 512GB Storage တို့အပြင် 5G Support နဲ့ Stereo Speakers ထည့်ပေးလိုက်ပြီ။ Android 10 ကို ColorOS 7.1 နဲ့ မောင်းနှင်ထားပြီး Pro မော်ဒယ်မှာ 4,260 mAh Battery သုံးတယ်။
Super VOOC 2.0 65W Fast Charging ထည့်ပေးထားပြီး ၃၈ မိနစ်အတွင်း အားသွင်းနိုင်မယ်၊ တချက်တွေးစရာရှိမှာက QHD+ Resolution မှာ 120Hz သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတယ်၊ 4,260 mAh Battery ခဏလေးနဲ့ ကွိလောက်တယ်။
OPPO ကတော့ 8hr Run-time ရတယ်လို့ ပြောထားပေမယ့် ရွှီးထားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Wireless Charging မရသေးတာ အားနည်းချက်ထက် လိုအပ်ချက်လို့ ပြောရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
Find X2 မှာ ကွာသွားတဲ့အချက်က 12MP Ultra-wide သုံးထားတာဖြစ်ပြီး 4,200 mAh Battery နဲ့ 256GB Storage မတူတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အပြင် Pro နဲ့တည့်ပြောရင် ပိုပါးပြီး ပိုလည်းပေါ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် လိမ္မော်ရောင် Leather နဲ့ ရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတစ်ခါမှာလည်း Partnership အနေနဲ့ Lambo Version ကြေညာထားသေးပြီး Exclusive Edition မှာ ပါဝင်လာမှာက
Lambo Edition Box
Super VOOC 2.0 Flash Carge Power Brick
USB Type-C to C Cable နဲ့
Car Charger တို့ပါပဲ။
ကယ်.. Premium Flagship ဖုန်းလို့ ပြောနိုင်တဲ့ အချက်တွေကို သိသွားပြီ။ ဖုန်းကိုတော့ ကြိုက်နေပြီထင်ပါရဲ့ ၊ စျေးကိုတော့ ခိုက်မယ် မထင်ပါဘူး။ Pro ကို ဒေါ်လာ ၁,၃၅၀ ရောင်းစျေး သတ်မှတ်ထားလို့ S20 Ultra ($1,400) နဲ့ မကွာဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ၁၈ သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ ရောင်းချသွားနိုင်ပြီး Find X2 ကိုတော့ ဒေါ်လာ ၁,၁၃၀ (၁၄ သိန်းဝန်းကျင်) နဲ့ ရနိုင်တယ်။
Personal Feeling အရဆိုရင်လည်း စျေးကြီးမှန်းသိနေပေမယ့် S20 စီးရီးထက်စာရင် ပိုသဘောကျတယ်။ High-end ဆိုတာထက် တွေ့ရခဲတဲ့ Premium Feature တွေ တွေ့နေရတယ်။ ဒါမယ့် S20 Series နဲ့ ဘာကွာလဲ မေးချင်ပါသေးတယ်။
စာဖတ်သူတွေရော ဘယ်လိုမြင်လဲ? Impression Video နဲ့ Review ကျရင် ပြန်ဆုံပါဦးမယ်။
Source: TheVerge ၊ GSMArena 1 ၊2၊ Gadgets NDTV ၊ Android Headlines
Nvidia နဲ့ AMD တို့ အပီနွဲကျမယ့် ၂၀၂၀ PC စီးချင်းတိုက်ပွဲ